(DHEGAYSO) Madaxweyne Gaas.” Ma doonayno dadkeena xoolaha ku waayay abaarta inay noqdaan barakacayaal hoorsada raashinka WFP. | puntlandi.com
(DHEGAYSO) Madaxweyne Gaas.” Ma doonayno dadkeena xoolaha ku waayay abaarta inay noqdaan barakacayaal hoorsada raashinka WFP.
(Pi Garowe) Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inaysan marnaba doonayn in dadkii Puntland ee abaaraha xoolahoodii ku waayay ay noqdaan barakacayaal gacmaha u hoorsada raashinka WFP.
Madaxweynaha oo ka duulaya isku tashiga Puntland iyo shacabkeeda wuxuu sheegay inay dhaqaale u raadinayaan sidii dadkaas dib xoolo loogu iibin lahaa, si ay ugu laabtaan nolashoodii caadiga ahayd ee miyiga.
Madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale sheegay inay dib u celin u sameynayaan dadkii Puntland ugasoo hayaamay dhulkooda, kuwaas oo soo maciin biday roobabkii yaraa ee dabayaaqadii sanadkii hore ka da’ay gobolada Bari iyo Karkaar, dadkaas oo isaga kala yimid maamulada Soomaaliya.
Sanadkii 2014, dowladda Puntland oo kaashanaysay shacabkeeda gudaha iyo dibada ayaa ku guulaysatay in xoolo loo iibiyo kumanaankii reer Puntland ee ku xoolo waayay duufaanadii Puntland ku dhuftay dabaayadii 2013.
Halkaan codka madaxweyne Gaas.